Ny mpitsara dia hihaino ny raharaha fanolanana ara-nofo nataon'ny mpiasan'ny sidina American Airlines
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Mpitsara hihaino ny raharaha fanolanana ara-nofo nataon'ny mpiasan'ny sidina American Airlines
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Mpitsara hihaino ny raharaha fanolanana ara-nofo nataon'ny mpiasan'ny sidina American Airlines
.Ny mpitsara dia hihaino ny raharaha fanolanana ara-nofo nataon'ny mpiasan'ny sidina American Airlines .
Tsy nahomby ny American Airlines tamin'ny fikasana hanakana ny fitakiana herisetra ara-nofo ataon'ny mpiasan'ny sidina.
Ny didy navoakan'ny mpitsara Kimberly Fitzpatrick dia mandà ny ampahany rehetra amin'ny fihetsiketsehana ho an'ny famintinana didim-pitsarana napetraky ny Amerikana izay nikatsaka ny tsy hamela ny mpitsara hihaino ny raharaha.
Natolotra ny fitsarana ny raharaha 342 azynd Fitsaram-paritry ny Fitsarana 24 Janoary 2022.
Ny fitoriana an'i Kimberly Goesling dia ahitana fitakiana fametavetana, firaisana tsikombakomba ary valifaty.
Ny mpiasan'ny sidina American Airlines izay milaza fa nanao firaisana ara-nofo tamin'ny chef malaza nokaramain'ny zotram-piaramanidina izy dia hahazo fahafahana hilaza ny tantarany amin'ny mpitsara, taorian'ny fanapahan-kevitra lehibe nataon'ny mpitsara ao amin'ny distrikan'i Tarrant.
Ny didim-pitsarana, nataon'ny Mpitsara Kimberly Fitzpatrick, dia mandà ny ampahany rehetra amin'ny didim-pitsarana famintinana napetraky ny American Airlines izay nitady ny tsy hamela ny mpitsara hihaino ny raharaha. Natolotra ny fitsarana ny raharaha 342 azynd Fitsaram-paritry ny Fitsarana 24 Janoary.
"Ny finoanay hatrizay dia hoe rehefa mandre ity raharaha ity ny mpitsara ao Fort Worth ary mandre ny zava-nitranga tamin'ny mpanjifako - sy ny tsy niraharahan'ny Amerikana azy ary avy eo namaly azy - dia ho gaga izy ireo," hoy ny mpisolovava Robert Miller ao amin'ny Miller Bryant LLP. any Dallas, izay misolo tena ny mpitory. "Ny hany tadiavinay dia ny hitantara ny tantaranay amin'ny mpitsara ary manana izany fotoana izany izahay."
Ny mpitory amin'ny raharaha, Kimberly Goesling of Fort Worth, nitantara ampahibemaso voalohany ny zava-nitranga taminy – sy ny anjara asan'ny Amerikana tamin'izany – tamin'ny lahatsary Facebook sy Instagram tamin'ny 2021 izay nahatratra olona maherin'ny 25,000.
Ramatoa Goesling, mpanamory fiaramanidina efa ho 30 taona ho an'ny American Airlines, manana firaketana momba ny asa izay mametraka azy ho isan'ny tsara indrindra amin'ny orinasa. Mpitarika mpiasan'ny sidina izy ary niasa tamin'ny ekipa fandraisana mpiasa sy fanofanana an'ny zotram-piaramanidina. Maherin'ny indray mandeha izy no nahazo tsikera manjelanjelatra momba ny fahombiazan'ny asa, izay matetika miteraka fanendrena manokana.
Tamin'ny Janoary 2018, dia nandeha tany Alemaina izy, ary niaraka tamin'ireo mpiasan'ny American Airlines hafa, dia nanampy tamin'ny famolavolana sakafo iraisam-pirenena manokana ho an'ny mpandeha voalohany sy sangany izy.
Tao anatin'ilay dia ihany koa dia nisy chef malaza iray izay nokaramain'ny Amerikana tsy nisy fisavana fiaviana ary nanohy niasa na dia efa nahafantatra ny fiampangana azy teo aloha noho ny fidorohana zava-pisotro misy alikaola sy ny firaisana ara-nofo tsy mendrika, araka ny fitoriana. Tamin'ny alina farany nijanonan'ny tarika, niditra an-keriny tao amin'ny efitranon-dRtoa Goesling ilay chef ary nanao firaisana ara-nofo taminy. Ny fanadihadiana nataon'ny Amerikana ihany no nampiseho fa niaiky ny fanafihana izy.
Rehefa nitatitra ny fanafihana tamin'ny orinasa izy, dia nampanantena ireo mpitantana fa handoa an-dRamatoa Goesling amin'ny fitsaboana ary hamela ny fotoana hialany amin'ny fiovan'ny asa, raha ilaina. Tsy nanao na inona na inona izy ireo, fa nesoriny tsy ho eo amin'ny toerana nitsiriritra azy tao amin'ny ekipan'ny zotram-piaramanidina.
Tafiditra ao anatin’ny fitoriana nataony ny fitakiana fametavetana, firaisana tsikombakomba ary valifaty. Ny raharaha dia Kimberly Goesling v. American Airlines et al., Cause No. 342-314565-20 ao amin'ny Fitsarana Distrika Faha-342 ao amin'ny Tarrant County.